IDEA MAGAZINE: August 2009
Idea September Issue Cover
Friday, August 21, 2009 at 4:58 PM
Filed under cover0comments
Thursday, August 20, 2009 at 5:15 PM
မပျော်ဘူးဆိုတာကို ပျော်ပျော်ကြီးကို တေးဆိုပြီ
Filed under idea poems - sept'094comments
ကျွန်တော်ဟာ “မမ” ရဲ့ နွားကလေးတစ်ကောင်ပေါ့၊
အဝေးပြေး လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံး ရင့်မှည့်နေခဲ့ပြီ
ကျွန်တော် . . . အိမ်ကို ဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲ ?
. . . . . . ကျွန်တော်ပေါ့။
အခုတော့ . . .
နွေရောက်ရင် သိမ်းဆည်းရတဲ့ အနွေးထည်လို
ကျွန်တော့်ကို အပြစ်မတင်လိုက်ကြပါနဲ့ဗျာ . . . ၊
“မူး” ကိုလည်း “မြစ်” လို့ ထင်ခွင့်ရှိတယ် မဟုတ်လား။
Filed under idea poems - sept'092comments
Filed under idea poems - sept'09 1 comments
( Zephyr ၏ကဗျာများဖြစ်သော… ၁။နာဖျားနေသောဂီတ ၂။မီးလျှံနဲ့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့တဲ့တိမ် ၃။ရွက်ကြွေရင်ဘတ် ၄။ချုပ်ရိုးပြေစအလွမ်းတွေ ၅။ဝိမုတ္တိအပိုင်းအစ တို့နှင့်ဖွဲ့တည်ထားသည်။)
ဒီလို ဖြေလိုက် ထင်မိ
ကျုပ် ယုံကြည်ချက်အတွက် ကျုပ်အလုပ်လုပ်နေတာပါလို့
ကျုပ်အဖို့ ပိတ်နေတဲ့ တံခါးကို လှပ်လိုက်တော့
ပွင့်သွား . . .အိုး!
ကျုပ်လိုက်မိတဲ့ လမ်းက အလွယ်လမ်း တစ်ခု
အဲသလိုနဲ့ တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်း ဖွင့်ဝင်လာခဲ့
အသိဝင်လာတော့ တံခါးတွေလည်း ပိတ်ပေါ့
Filed under idea poems - sept'090comments
ရှုခင်းလေးဟာ ရှုခင်းလေးအတိုင်း တည်တည်တံ့တံ့ . . . .
နာရီသေပေါ် တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတော့တယ် . . . ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးက သီရေတာကပြ လူ့ဘ၀ကလည်း သီရေတာကပြ
(ညက ကျွန်တော် အိပ်မက်ခုနှစ်လွှာတိတိပရိုဂရမ်ရတယ်)
စကော့တလန်မှာ ပင်လယ်ဖျံကောင်ကို ဘယ်သူမှသတ်လို့မရ ပိတ်ပင်ထားပါ တယ်
မက္ကဆီကိုမှာ ပင်လယ်လိပ်သတ်ဖြတ်မှုကို တားမြစ်ထားတယ်။ ပင်လယ်လိပ်တွေ ရှားပါးနေပြီ
လမ်းလျှောက်တုန်းလေထု ညစ်ညမ်းတာ သတိမရရင် ဘ၀လည်းညစ်ညမ်းမယ်
ကာရေဘီယန်ကျွန်းစုတွေမှာ ပင်လယ်မျောကျွန်းတွေနည်းရင် ငါးတွေပေါက်ဖွား မှု နည်းလာမယ်
ဂရင်းဟောက်ဂက်(စ်) ထုတ်လွှတ်မှုကို လေ့လာနေကြတယ် နှစ်(၂၀)အတွင်း ရာသီဥတုဟာ ကမောက်ကမ ခေးအော့(စ်)ဖြစ်နေသရွေ့
ဂျပန်က သြစတြေးလျကို ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလေ့လာဖို့ အကူအညီတောင်း တယ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှု ကမ္ဘာဘုံညီညွတ်စေမလား။ အထီးကျန်မှုမရှိစေရ။
ပင်ဂွင်းငှက်တွေ ပင်လယ်ဖျံတွေ ရေကူးတဲ့ငှက်တွေ မပျံတဲ့ငှက်တွေ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဒါဏ်ခံကြရ
အာတိတ်သမုဒ္ဒရာက ရေခဲပြင်တွေပျော်ကြလာနေပြီ global ပူနွေးမှု
လူဘ၀အပူတွေဟာ ဂလိုဘယ်အရေပျော်မှုကို ဘယ်လိုဆက်နေသလဲ
ဂျီ (8) ၀န်ကြီးတွေ မျိုးပွာဗီဇကွဲပြားမှုကို အထောက်အကူပြုဖို့ တောင်းပန်ခန်းမှာ အစ္စရေးက စပိုင်ဒါပင့်ကူတွေဟာ သားမွေးမှုကို ထက်မြက်စွာလုပ်နေကြ
ပါကစ္စတန်က Nazir Mirani က မျက်ကန်းဝေလငါးတွေကို စောင့်ရှောက်လာတာ မျုိးဆက်(၃) ဆက်ရှိခဲ့ပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘာဝအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မျိုးဆက်များစွာ ထိန်းသိမ်းခဲ့ ပြီ မဟုတ်လား
ငှက်မတွေဟာ ဘာကြောင့် ငှက်ထီးတစ်ကောင်ထက် ပိုပိုပြီး မိတ်လိုက်လဲဆိုတာ သုတေသနလုပ်နေကြပြီ
ငှက်ထီးတွေကရော . . . . . .?
Filed under your idea - sept'090comments
လက်ခုပ်သံသည် ကျွန်တော်ပျာပျာသလဲထထူးရမည့် ကျွန်တော့် Boss၏ ငှက်ဆိုးထိုးသံမဟုတ်။
လက်ခုပ်သံသည် ကျွန်တော့်အားနှဖါးကြိုးရန်အမြဲတမ်းအဆင့်သင့်ဖြစ်နေတတ်သည့်ချစ်သူ၏ပျားရည်စိမ်ထားသော ပြုံးရယ်သံမဟုတ်။
လက်ခုပ်သံသည်မကောင်းမှုတစ်ခုအားမီးညှိရန်ဓါတ်ငွေ့မီးခြစ်ကိုဖိခြစ်လိုက်သည့် လျှို့ဝှက်ထား သောအံကြိတ်သံမဟုတ်။
လက်ခုပ်သံသည်ဘယ်အချိန်ကြားကြားလွဲမှားရန်မရှိသည့်မိုးထစ်ချုန်းသံ၊ထူးခြားသောအသံရှင်တများဖြစ်သည့် ဦးကျောက်လုံး၊ ဦးဝင်းဦး၊ ကျော်ဟိန်း၊ ဇော်ဝမ်း၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၊ စီလိုင်းဒီယွန်၊ မောင်ကြေးမုံ၊စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ရာဇာနေ၀င်း၊ အာမီနမ်၊လေးဖြူ၊ဇော်ဝင်းထဋ်၊ ဒိုးလုံး၊ ဂရင်းဒေး၊ ဖြူ ဖြူကျော်သိန်းနှင့် ကျွန်တော့်ဘကြီးထော်လာဂျီတို့၏အသံများမဟုတ်။
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ ……..ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …….ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက်ဖျောက်၊ ……….
ကျွန်တော့်ရှေ့မှလူများကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်မိသည်။ အချို့ကထိုလက်ခုပ်သံကြားရာသို့လှမ်း ကြည့်လိုက်သော်လည်း
အဆက်အစပ်မရှိသည်၌ လှမ်းလက်စခြေလှမ်းများကိုပုံမှန်ပင်ဆက်လ်ကရွေ့လျားနေခဲ့ကြပါ သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်နောက်မှလမ်းလျှောက်လာနေကြသော သူတို့ကိုငဲ့စောင်းကြည့်မိလိုက် ပါသည်။
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ ….ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …….ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက်၊ ……..ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုများလား။
မိုက်မဲသောအတွေးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကလည်းအခြားသူများကို လက်ခုပ်တီးပြီးခေါ်တတ်သူ မဟုတ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌စားသုံးသူအချို့က စားပွဲထိုးလူငယ်လေးများကို လက်ခုပ်သံ၊လက်ဖျောက်တီး သံ၊စုတ်ထိုးပြီးခေါ်သံတို့ဖြင့် ခေါ်ငင်ဆက်ဆံခဲ့ကြရာတွင် ကျွန်တော့်မှာကြားထဲမှ မဆီမဆိုင် မျက်နှာဝင်ပူနေတတ်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကလည်း သူများကိုလက်ခုပ်သံဖြင့်မခေါ်တတ်သလို ကျွန်တော့်ကိုလက်ခုပ်သံဖြင့် ခေါ် ပါကလည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့မြို့ကလေးတွင်မြို့ကြီးပြကြီးဆန်ဆန် Taxi မရှိပါ။
ကျွန်တော်ရောက်နေသောလမ်းမတော်လမ်း လမ်းမပေါ်တွင်လည်း မြင်း . .အစရှိသောသတ္တ၀ါတို့ ကိုအသုံးပြုသောယာဉ်များ ငှားရမ်းစီးနင်းခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုမထားပါ။
ကျွန်တော့်ရှေ့မှသွားလာနေကြသော၊ကျွန်တော့်နောက်မှ သွားလာနေကြဆဲ ပုဂိုလ်များကိုသော် လည်းကောင်း
ထိုလက်ခုပ်သံကအဆက်မပြတ်ခေါ်ငင်၊ အဆက်အသွယ်ပြုနေသည်မဟုတ်ပါက …….
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ . . ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …… ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက်၊…….။
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …….. ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ ……… ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက်ဖျောက်၊………….
ပွဲလမ်းတစ်ခုခုတွင် ပရိသတ်က နှစ်သက်၍လက်ခုပ်တီးအားပေးသံနှင့်မတူ။
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …… ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …….. ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက် ဖျောက်၊ ………
သာမန်လူတစ်ယောက်၏ဟန်ပန်အတိုင်းပင်။ သူ့အလုပ်ကို သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆောင် ရွက်နေသူတစ်ဦးပုံ။
သူနှင့်ကျွန်တော်နှင့်အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂတ်ပုံရိပ်ကောက်ကြောင်းများမရှိကြောင်း ပန်းချီ ဦးကျော်သောင်းက၀င်ရောက်ပြောဆိုပေးရန်အသင့်ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် မည်သူ့ကိုမျှခေါ်နေသည်မဟုတ်။ (သူ့အတွေးထဲတွင်တော့ သူခေါ်သည့်သူသည် အခိုင် အမာရှိချင်ရှိနေပါမည်။)
ယခုအချိန် …၊ ယခုလမ်းပေါ်တွင် လုံးဝရှိမနေခြင်းပင်။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုလှည့်ဖျားရန်၊ သို့မဟုတ် စော်ကားရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပုံလည်းမရ။
အနည်းငယ်ကြာလျှင်တော့ သူ့လက်ခုပ်သံကိုရုတ်သိမ်းရင်း၊ခေါင်းခါရမ်းရင်း ရွေ့လျားထွက်ခွာ သွားလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ …… ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်ဖျောက်၊ ……. ဖျောက်ဖျောက် ဖျောက်ဖျောက်၊ ………။
Filed under idea essay - sept'096comments
နှစ်ပတ်အလို THE TWO WEEKS NOTICE
စက်ရုံထဲတွင် အလုပ်သမားများ၏ အော်ဟစ်သံ၊ တောင်းဆိုသံတို့ဖြင့် ဆူညံနေသည်။ သီဟလတ်သည် ကားကိုအပြင်းမောင်း၍ စက်ရုံထဲက ရုံခန်းရှေ့တွင် တုန့်ကနဲရပ်လိုက်သည်။ ပြင်းထန်သောအရှိန်ကို တုန့်ကနဲရပ်လိက်သောကြောင့်၊ ကားဘီးသည် မြေကြီးပေါ်တွင် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီး၊ ကားနောက်ဘက်တွင် ဖုန်များအလုံးလိုက်ဖွင့်တက်လာ သည်။ စက်ရုံတစ်ခုလုံးမှ အလုပ်သမားများက “သီဟလတ်”ကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်။ ဆူညံသံ များဖြေးဖြေးချင်းငြိမ်သက်သွားသည်။ “သီဟလတ်” သည် ကားပေါ်မှ တည်ငြိမ်စွာဆင်းလိုက်ပြီး လှေကားသုံးထစ်သာရှိသော ရုံးလှေကားထိပ်တွင် ရပ်လိုက်သည်။ စောစောက ဆူညံနေသော အော်ဟစ်သံ၊ မကျေမနပ်မြည်တွံတောက်တီးသံများအားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။
အားလုံး၏မျက်လုံးတို့သည် “သီဟလတ်” ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘာပြောမလဲဆိုသည်ကို စောင့် ကြည့်နေပုံရသည်။
ထိုစောင့်ကြည့်နေသောမျက်လုံးများကို “သီဟလတ်”၏ တည်ငြိမ်သော မျက်လုံးများ ဖြင့် အေးဆေးစွာပြန်ကြည့်နေသည်။
သို့သော် . . . .
နှစ်ဘက်စလုံး၏မျက်လုံးများတွင် အဓိပ္ပါယ်တွေများစွာပါဝင်သော စကားလုံးများရှိနေကြ သည်။
“သီဟလတ်”၏မျက်လုံးတွင် ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ကြီးမားစွာဆုံးရှုံးသွားသောအဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်နေသည်။
အလုပ်သမားများ၏ မျက်ဝန်းသည်လည်း၊ “သီဟလတ်”၏ ခံစားမှုအတိုင်းရှိနေကြပုံရ သည်။ နှစ်ဘက်စလုံး၏မျက်လုံးများမှတဆင့်၊ နှလုံးသားများကို ထိုးဖောက်၍မြင်နေရသည်။
ထိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းကို စတင်ဖျက်ဆီးလိုကသူမှာ . . . စက်ရုံမန်နေဂျာ “ကိုဘကျော်” ဖြစ်သည်။
“ကဲ . . ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ။ ဘာလုပ်ရမလဲ . . ဆိုတာကို၊ မေးလေ . .ခုနတော့ အော်ဟစ်နေကြပြီးတော့၊ အခုတော့ ဘာမှမပြောကြဘူးလား . . . ပြောကြလေ။ ဘာလို့ ပါးစပ် တွေပိတ်နေကြတာလဲ” . . . .။
ကိုဘကျော်စကားကြောင့်၊ အလုပ်သမားအချို့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြသည်။ “သီဟလတ်”သိလိုက်သည်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုဘကျော်သည် ဒီလိုစကားမျိုးမပြောသင့်ပေ၊ ကိုဘကျော်သည်၊ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလုပ်၍ ပွဲဆူအောင်ဆွနေမှန်း။ သီဟလတ်သိလိုက် သည်။
ဒါဆို . .အရက်မူးနေသော ကိုကိုကြီးကိုလည်း ပို၍သွေးဆူအောင် သူပဲ“ဆွ”တာ ဖြစ်လိမ့် မည်ဟု သဘောပေါက်သွားသည်။
ထို့ကြောင့် . . . “သီဟလတ်”က အတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစား၍ပြောလိုက် သည်။
“ကျွန်တော် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ . .ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသ လဲ။ ဘာတွေကိုတွေးပြီး၊ ဘာတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်နေမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကို မြင်ရုံနဲ့သိပါတယ်”
“အဲဒီလိုပဲ . . . ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ ဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုလည်း ခင်ဗျားတို့မြင်ကြ မှာပါ၊ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖေဖေရှိစဉ်ကတည်းက၊ အခုချိန်ထိ၊ ဖေဖေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကြောင့်၊ ခင်ဗျားတို့နစ်နာတာ၊ ဆုံးရှုံးတာတစ်ခုခုရှိဖူးပါ သလား”
အလုပ်သမားများအချို့ ခေါင်းငုံ့သွားကြသည်။ အချို့က . . .သက်ပြင်းချကြသည်။ အချို့ က ခေါင်းမော့၍ ဘာမှမရှိသော ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေသည်။ အချို့က သူများမျက်နှာများ ကို လိုက်ကြည့်နေသည်။ အတန်ကြာတော့မှ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သူ ဦးလှမောင်ထ့မှ အသံ ထွက်လာသည်။
“မရှိပါဘူးကွယ် . . အခုကိစ္စက . . ဘယ်လိုပြောရမလဲ . . ”
သီဟလတ်က လက်ဖြင့်တားရင်း၊ ဆက်ပြောသည်။
“ကျွန်တော့်ကိုပြောရမှာ အားနာနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဆို ကျွန်တော်ပြောပြမယ်၊ အားလုံးကိုယ်စားကျွန်တော်ပဲ ပြောပြပါမယ့်”
“ကဲ . .အခုဆိုရင် Export ကို အားကိုးနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကြီးဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက လက်မခံတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြ မလဲ . . . .”
ဒီစက်ရုံကြီးကို မှီခိုနေရတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးနဲ့ အဲဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့ မိသားစု တွေအတွက် ဘယ်လိုစဉ်းစားပေးမလဲ . . . .
တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုပြောင်းဖို့ဆိုတာကလည်း ချက်ချင်းကြီးမဖြစ်နိုင်တော့၊ ဒီကြားထဲမှာ မိသားစုတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလ . . . .ဲ
အဲဒီအပြောင်းအလဲကာလအတွက် အရင်းအနှီးက ဘယ်မှာလဲ
ဘဏ်မှာပေါင်ထားတဲ့စက်ရုံကြီးကိုတောင် မရွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲ
အဲဒီလိုမေးခွန်းပေါင်းများစွာ . . .တွေကို ကျွန်တော်ကိုမေးချင်နေတာမဟုတ်လား”
“သီဟလတ်” ကပဲ ဆက်ပြောသည်။
“အဲဒီမေးခွန်းတွေကို အခုပဲ ကျွန်တော်ဖြေပါ့မယ်။
ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာ . . . အခုရောက်နေတဲ့အချိန်အထိ၊ ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ စီးပွား ရေးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် . . ခင်ဗျား တို့မိသားစုတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့မိသားစုက ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ် ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ . . အဆိုးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကို သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင် . . .အဲဒါဟာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်လာတဲ့ဒီစက်ရုံကြီးကို ပိတ်လိုက်ရပြီဆိုပါတော့၊ အဲဒီ့အခြေအနေမှာတောင် ၀န်ထမ်းအားလုံးကို တစ်ယောက်သုံးခစာ နှုန်းပေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အခုစီးနေတဲ့ကား၊ နေနေတဲ့အိမ်တွေကို ရောင်းပြီးပေးမယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော့် . . . အသက်ကို အပေါင်ထားပြီး၊ အားလုံးကိုကျွန်တော်ကတိပေးပါ တယ်။
ဒါဟာ . . . . . .
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖေဖေကိုချစ်တဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက် ဖေဖေကချစ်တဲ့ သူအလုပ် သမားတွေအတွက် . . .ကျွန်တော်ရဲ့ ပေးဆပ်မှုပါပဲ”
အလုပ်သမားတွေအားလုံး သီဟလတ်ကို မမှိတ်မသုန်၊ တအံ့တသြကြည့်နေကြသည်။ ဘာသံမှမကြားအောင်ငြိမ်သက်နေကြသည်။ ထိုစဉ် အဘဦးလှမောင်ထံမှ လက်ခုပ်သံချောက် ကပ်ကပ်ကို စတင်ကြားရသည်။ ထို့နောက် . .လက်ခုပ်တီးရန် သတိရသွားမိပြီး၊ အားလုံး၊ လူတိုင်း၊ တစ်ယောက်မကျန်၊ တီးလိုက်သောလက်ခုပ်သံသည် သီဟလတ်ခနာကိုယ်ထဲအထိ၊ စီး ၀င်တုန်ခါသွားပြီး၊ ကြက်သီးများတဗျန်းဗျန်းထကာ၊ သီဟလတ်ပါးပြင်ပေါ်သို့ . . .မျက်ရည်များ စီးကျနေသည်။
ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာမှုတွေရော၊ ၀မ်းနည်းမှုတွေပါ၊ ရောပြွမ်းနေသည်။ သီဟလတ်၏ ဆုပ်ထားသောလက်များ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။
မိုးရာသီ၏ကောင်းကင်ပေါ်တွင် တိမ်ဖုံးနေသော နေမင်းကြီးသည်ပင် လက်ခုပ်သံကြောင့် တိမ်များလွင့်စင်၍ လောကကြီးအားကောင်းချီးပေးရန်၊ အလင်းပြူပြီး၊ ခပ်ကျဲကျဲလေးပင် ပူနေ သလားဟု ထင်ရလေသည်။
အလုပ်သမားတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သော ဦးလှမောင်ကြီးသည် မျက်ရည်များ ၀ိုင်းနေသည့်မျက်လုံးကြီးဖြင့် “သီဟလတ်”ကိုကြည့်ရင်း သာဓု . . သာဓု . .သာဓု . . ပါးစပ်က ခေါ်၍ လက်အုပ်ချီနေရှာလေတော့သည်။
“အဖေ . . . . .
အခု ကျွန်တော်ကျတဲ့မျက်ရည်ဟာ . . . .
အဖေချစ်တဲ့ အဖေ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ လက်ခုပ်သံနဲ့
ကျခွင့်ပေးပါ “အဖေ” . . . . . . ”
လိုချင်လွန်းလို့ . . .
လက်ခုပ်နှစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းကြည့်လိုက်တော့ . . . .
တကယ်တမ်းဖမ်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါ . . .
လမင်းဟာ လက်ခုပ်ထဲက . . . .
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ . . . “သီဟလတ်” ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်
လမင်းသည် “မျှော်လင့်ချက်” ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
Chanceller “အဓိပတိ” ဘဏ်၏ရုံးခန်းသည် ခမ်းနားကြီးကျယ်လွန်းလှသည်။
ထိုဘဏ်၏ဥက္ကဋ္ဌဧည့်ခန်းထဲတွင် “သီဟလတ်” ခံစားနေရသည်။ သူတို့မိသားစု၏ ကံကြမ္မာသည် ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးမြင့်ကိုယ်စား၊ ယာယီဥက္ကဋ္ဌနေရာကို တာဝန်ယူထားသော “အဓိပတိ”၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်နေသည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က ဒီရုံးခန်းအတွင်းသို့ ကိုကိုကြီးရောက်လာခဲ့ဖူးသည်။ အဓိပတိ သည် “နှစ်လည်အစည်းအဝေးလုပ်နေ၍မတွေ့နိုင်” ဟူသော ငြင်းပယ်ချက်ကြောင့် ခေါင်းမာ၍ ကျွတ်ဆပ်ဆပ်နိုင်သောကိုကိုကြီးက “အဓိပတိ” နှင့် မတွေ့ရလျှင် မပြန်ဘူးဟု ဇွတ်ပေ၍ထိုင်နေ ခဲ့သည်။ “အဓိပတိ”၏ ၀န်ထမ်းများနှင့် မကျေမလည်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး၊ ကိုကိုကြီးကို လုံခြုံရေးများက အတင်းဆွဲထုတ်သွားခဲ့သည်အထိ၊ ဒီနေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုကိုကြီးက နှစ်ပတ်အတွင်း “မေမေ” သာ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့လျှင် ယခုကဲ့သို့ပြုမူခြင်းအတွက်၊ “အဓိပတိ” အားသတ်မည် ဟု ကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။ တစ်ခုသက်သာသွားသည်မှာ ကိုကိုကြီး၏ဒေါသအလျှောက် မိသားစု “ဇော” ဖြင့် ပြုမူပြောဆိုခဲ့သည်များကို၊ “အဓိပတိ”တို့ဘက်မှ ဥပဒေအတိုင်း အရေးမယူခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အရေးယူခဲ့ပါက တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်ဆိုသလို၊ ကိုကိုကြီးလည်းအချုပ်ထဲရောက်၊ “သီဟလတ်” လည်းရုံး “ဂါတ်” ရောက်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့ မလုပ်ခြင်းအတွက်ပင် “အဓိပတိ” တို့အား ကျေးဇူးတင်ရမလိုဖြစ်နေသည်။
သူသည် . .ဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ယောက်မဟုတ် . . .။
ဆင်ခြင်တုန်တရားနည်းပါးသည်။ ဒေါသကြီးသည် . . .။
ထိုကြောင့် . . .ယခုတစ်ကြိမ်တွင် သီဟလတ်ကိုယ်တိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကိုကြီး လုပ်သွားသောပြဿနာများကို သီဟလတ်လိုက်ရှင်းရခြင်းအတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ ချေ . . . . . ။
“သီဟလတ်” အတွေးမဆုံးခင်မှာဘဲ “အဓိပတိ” ဧည့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်။
ကြည်လင်သောမျက်နှာရှိသည်။ မဖြူလွန်း၊ မညိုလွန်းသော အသားအရေရှိသည်။
“ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ . . .ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်ရဲ့သား နိုင်ငံခြားမှာဘွဲ့ယူလာတဲ့သူ ရွှေလင်ဗန်းနဲ့အချင်းဆေးလာတဲ့သူပဲ . . ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့” ဟု သီဟလတ်တွေးနေမိသည်။
အဓိပတိက သီဟလတ်နားသို့လျှောက်လာပြီး “ကျွန်တော်အဓိပတိ”ပါ ဟုပြောရင်း လက်ကမ်းပေးသည်။
“သီဟလတ်”ကလည်း သွက်လက်ဖော်ရွေစွာဖြင့် လက်ပြန်ကမ်းရင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် လိုက်ကြသည်။
အဓိပတိက ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဆက်တီခုံပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ပြီး။
“ခင်ဗျားနဲ့ဘာတော်လဲမသိဘူး၊ သြရသဆိုတဲ့လူလေ . . .”
“ကျွန်တော်အကိုအရင်းပါ . . . အခုကျွန်တော်လာတာလည်း အဲဒီကိစ္စကတစ်ခုပါပါတယ်
ကျွန်တော့်ကိစ္စကနှစ်ခုပါ၊ ပထမကိစ္စက ကျွန်တော်အစ်ကိုသြရသရဲ့လုပ်ရပ်အတွက် လာတောင်းပန်တာပါ”
OK . . . အဲဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်ပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီကိစ္စ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး၊ ကိုသြရသလည်းကျွန်တော့်ဆီကို ဘယ်တုန်းကမှ မလာခဲ့ဘူးလို့ မှတ်ထားလိုက် ပါ။
“သီဟလတ်”သည် အဓိပတိ၏အပြောအဆို ပါးနပ်ပုံကိုစိတ်ထဲက ကျိတ်၍ချီးကျူးမိရင်း သီဟလတ်စကားကိုဆက်လိုက်သည်။
“ဘဏ်ချေးငွေအတွက် . . .ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုပြန်ရွေးဖို့ . . .(Extention) အချိန်တိုး ပေးဖို့ ကိစ္စလေးပါ အဓိက ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မေမေရဲ့ကျန်းမာရေးပါ”
“အဲဒီအတွက် . . .. ”
သီဟလတ်စကားမဆုံးခင်မှာဘဲ အဓိပတိက စကားကိုဝင်ဖြတ်လိုက်သည်။
“အဲဒီကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့စက်ရုံ file ကိုလည်း ကြည့်ပြီး ပါပြီ။ အချိန်ကလည်း သုံးနှစ်ကျော်သွားပြီ၊ ပြန်ရွေးဖို့နို့်တစ်စာပို့တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်ရှိသွားပြီ အခုတကြိမ်ကတော့. . .ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ . . . နောက်ဆုံးအကြိမ်စာပို့ လိုက်ရတာပါ . . အဲဒီအတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ်”
အဓိပတိ၏လေသံသည် အေးဆေးတည်ငြိမ်လွန်းလှသည်၊ တရားသူကြီးတစ်ဦး၏ စီရင် ချက်ချသော လေသံမျိုးနှင့်တူလှသည်။
“အရင်အကြိမ်တွေ နို့တစ်စာပို့တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ဖေဖေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုလု နေရတဲ့အခြေအနေမို့ပါ . . .ဒါပေမယ့်လည်း . . .မရခဲ့ပါဘူး
နောက်ဆုံးတော့ . . .
“ဖေဖေကိစ္စပြီးလို့မှမကြာပါဘူး၊ မေမေလည်းမေမေ့စိတ်နဲ့အိပ်ရာထဲလဲတော့တာပါပဲ။ အခုလဲ . . . မေမေ့ကိုဖေဖေ့လိုမဆုံးရှုံးရအောင်ကြိုးစားနေရလို့ . . . အခုလိုနောက်ကျနေရတာ ပါ . . .”
သီဟလတ်စိတ်ထဲမှာ ပြောရင်းငိုချင်လာသည်။ သူစိမ်းယောက်ျားရှေ့မှာ ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျမှာကို မလိုလားသဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းထားရင်း . . .
“ကျွန်တော်ပြောတာကို ဒီက . ..ဒါရိုက်တ်ာကြီးလဲ မိခင်ခြင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ နာလည်းပေးနိုင်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်”
အဓိပတိသည် သီဟလတ်ပြောနေချိန်တစ်လျှောက်လုံး သေချာစူးစိုက်စွာနားထောင်နေပြီး သီဟလတ်စကားဆုံးတော့မှ သက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချရင်း . . . .
“အေးဗျာ . . .ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး”
“လောကမှချစ်သူမရှိဘဲ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပေမယ့် အမေမရှိဘဲမွေးလာ တဲ့သူရယ်လို့မရှိပါဘူး၊
အမေမသိဘဲ မွေးလာတဲ့သူသာရှိပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် . ..ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ကိုယ်ချင်း စာပေးလို့ရပါတယ်”
“ဒါပေမယ့်ဗျာ . . . ကျွန်တော့်တစ်ယောက်ထဲ ခင်ဗျားကိုနားလည်ပေးလို့ရပေမယ့်၊ ဆုံး ဖြတ်ချက်ကိုတော့၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ချထားတာမို့လို့၊ ကျွန်တော့်သဘောတစ်ခုထဲနဲ့တော့ ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါကျမှ ကျွန်တော်တင်ပြလို့ရမှာပါ။ လောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ ပထမချမှတ်ထားတဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အကြံပေးချင်တာက ခင်ဗျားတို့တစ်နေရာရာက ငွေလှည့်ပြီး ခဏပြန်ရွေးထားလိုက်ပါ၊ နောက်တော့မှ ဘဏ်မှာပြန်ပေါင်ပြီး၊ အဲဒီငွေကိုပြန်ဆပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်”
“ဒါ . . .လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘက်က ကူညီနိုင်တဲ့ . . အခြေအနေပါပဲ။
အဲဒီထက်ပိုပြီး . . .ကျွန်တော်မကူညီနိုင်တာ ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ . . . .”
“ဟီဟလတ်” ၏မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ အခိုးအငွေ့အဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ ဆိုတာ ကို သိလိုက်ရသည်။ ရင်ထဲမှာ စစ်ကနဲနာကျင်သွားမိသည်။ မေမေ့အတွက် သူ . .လုပ်ပေးသင့်သ လောက် မလုပ်ပေးနိုင်တာကိုတွေးရင် ၀မ်းနည်းမိသည်။ အဓိပတိကို ပြန်ပြောစရာ စကားမရှိ သလို ဖြစ်နေသည်။ ဒီထက်အောက်ကျို့ပြီး တောင်းပန်လျှင်လည်း ဘာမှထူးမည်မဟုတ်မှန်းကို သီဟလတ်တွက်ဆတတ်သည်။ သီဟလတ်သည် သူ့ကိုယ်သူတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းရင်း၊ အဓိပတိရင်ထဲမှာစွဲကျန်နေမည့်စကာတစ်ခွန်းကို ရွေးချယ်ပြီး ပြောလိုက်မိသည်။ ထိုစကး၏ နောက်ကွယ်မှာ အဓိပ္ပါယ်များစွာကိုတော့ တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားရင်း သူသဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
“အခုလို . .အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တာ့်ကိုမကူညီနိုင်တဲ့ အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ . . .ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန် ချိန်မှာ ကိုအဓိပတိတို့ မိသားစုလည်း အလားတူဒါမှမဟုတ်၊ အခြား အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံလာနိုင် ပါတယ်
အဲဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ . . . .
ကူညီခွင့်ရသူဟာ၊ ကျွန်တော်ဖြစ်ပါစေလို့ . . .ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် . . .ကျွန်တော်ကို သွားခွင့်ပြုပါ . . .”
သီဟလတ် . . အဓိပတိဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအခန်းမှ ခပ်သွက်သွက်ထွက်လာခဲ့သည်။
ထိုစကားအတွက်၊ အဓိပတိမည်ကဲ့သို့ခံစားရမည်ကို မသိချင်တော့ပေ။
သီဟလတ်၏စိတ်များသည်၊ သူစီးလာသည့်ဓာတ်လှေကားကို တစ်ဆင့်ခြင်းနိမ့်ကျသွား သလို ခံစားနေရသည်။
လောလောဆယ်သီဟလတ်၏ရင်ဘတ်သည် ဓါတ်လှေကားတံခါးလို နှစ်ခြမ်းကွဲ၍ ထွက် နေပေသည်။
လမ်းမပေါ်တွင် လူစည်းကားရာအရပ်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူစည်းကားချိန်ဖြစ် သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူများသည် ပုရွက်ဆိတ်အုံလို၊ ပျားပန်းခတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ အဲဒီလူတွေထဲက တစ်ယောက်တလေများ “သီဟလတ်” ရင်ထဲအပူကို ငြိမ်းပေးနိုင်မည့်သူ မရှိ တော့ဘူးလားဟု တွေးမိနေသည်။ သူ့ကူညီနိုင်မယ့်သူရော တစ်ယောက်တလေများမရှိတော့ ဘူးလားဟု တွေးမိနေသည်။ သူ့ကိုကူညီနိုင်မယ့်သူရော တစ်ယောက်တစ်လေများမရှိတော့ဘူး လားဟု တွေးနေမိသည်။ သီဟလတ်ကားရပ်ထားရာ တစ်ဘက်ကားလမ်းသို့ တစ်ဘက်ကား လမ်းသို့ ကူးလာနေသော်လည်း သီဟလတ်သည် စိတ်နဲ့လူမကပ်တော့ပေ။ ကားတစ်စီးသည် ကားကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လမ်းဖြတ်ကူးနေသည့် သီဟလတ်ကို မတိုက်မိအောင် ဘရိတ်အုပ်ရင်း၊ သီဟလတ်ကို ပွစိပွစိဖြင့် ပြောသွားသည်ကိုပင် သီဟလတ်မသိတော့ပါ။
သူသိချင်နေတာက . . .
ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အဖြေကို . . .
ကန္တာရထဲမှာရေငတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက် . . .
အိမ်ခြံမြေတွေ အရောင်းထိုင်းနေချိန်မှာ . . .
၀ယ်ရောင်းတွေလက်ထဲကို . . .
အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်တောင် စက်ရုံကိုပြန်ရွေးနိုင်မည့်အခြေအနေမရှိသေး၊ ပြန်ရွေးနိုင်လျှင် လည်း၊ ထိုစက်ရုံကထွက်သည့်အထည်များကို ယူမည့်သူမရှိစက်ရုံကိုပြန်ရောင်းဖို့ဆိုတာ၊ စီးပွား ရေးကပ်သင့်နေချိန်မှာ ၀ယ်သူကိုအလှယ်တကူရှာလို့ ရနိုင်မည်မဟုတ်။
ထို့ကြောင့် . . . စက်ရုံကို အဆုံးခံလိုက်ရုံသာရှိတော့သည်။ အိမ်နှင့်ကားရောင်းရငွေနှင့် အလုပ်သမားများကို သုံးလခစာစီပေး၍ ကျန်ငွေနှင့် အမေ့ကျန်မားရေးအတွက် ဆေးကုစရိတ်ဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ကာ နေစရာအိမသစ်တစ်လုံးကိုလည်း ပြန်ဝယ်ရမည်။ ထိုအိမ်သစ်ကို အခြားဘဏ်တစ် ခုတွင် ထပ်ပေါင်၍ စီးပွားရေးအရင်းအနှီးလုပ်ကာဘ၀ကိုအစမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရမည်။ အားလုံးထဲမှာ အမေ့အသက်ကိုငွေနဲ့စက်၍ သေမင်းလက်က လုယူဖို့က ပိုအရေးကြီးသည်။ သူ့ တို့မောင်နှမသုံးယောက်စလုံးကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြသည်။
မောင်နှမသုံးယောက်စလုံးတိုင်ပင်လိုက်သောအခါ . . .
ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်။ အဲဒါကတော့ အိမ်ရောင်းသောအခါ ဂရန်သည် အမေ့ နာမည်ပေါက်ဖြစ်သောကြောင့် အမေက ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ(သို့မဟုတ်) အမေကိုယ်တိုင် ထို စာချုပ်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ထိုးမှ တရားဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဖေ့လက်ထပ်ကတည်က အဖေခေါင်းချခဲ့သောဒီအိမ်ကြီးကို ရောင်းချရန်အတွက် အမေ့ ကို မည်သူပြောမည်နည်း။
မည်သို့ပြောရမည်နည်း . . ။
အမေကရော ဤကိစ္စအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိပါမည်လား . .. ၊
နှလုံးရောဂါကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်မိသည် . . .။
ပြီးတော့ . . . အဆိုးဆုံးက . . .
ဖေဖေရှာဖွေထားခဲ့သော စီးပွားဥစ္စာများကို သားသမီးများလက်ထက်ကျတော့မှ မတိုးတက် လာသည့်အပြင် ပို၍ ဆုတ်ယုတ်သွားပါကလားဟု အမေတစ်ယောက်၏ အထင်သေးခြင်းကိုခံရ မှာ . . . ကိုတွေး၍ ရှက်နေမိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖေဖေခေါင်းချခဲ့တဲ့ ဒီအိမ်ကြီးမှာ ဖေဖေရဲ့အငွေ့အသက်တို့ရှိနေသေးသည် ကို မေမေနှမျောရှာလိမ့်မည်။
စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်ပုံတင်ဌာနမှာအရာရှိ၊ ရှေ့နေတို့သည် သူတို့၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန်ရောက်ရှိနေကြသည်။ မောင်နှမသုံးယောက်က အမေ့အနားတွင် ရပ်နေကြသည်။ “အမေ”သည် တိုက်ပုံအနက်ရောင်ဝတ်ထားသူကို ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိပုံရ သည်။ ဘေးတွင်ထိုင်နေသော စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တိုက်ပုံပေါ်မှ အမည်နှင့် ရာထူးရေးထားသော Name Plate ကို ကြည့်၍ ခန့်မှန်းနေပုံရသည်။ ကိုကိုကြီးသည် အမေ့ခေါင်း ရင်းရှိပြတင်းပေါက်မှ အပြင်သို့ငေးကြည့်ကာ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားသည်။
“သီဟလတ်” သည် အမေ့ရှေ့တွင် အပြစ်ရှိသောတရားခံတစ်ယောက်လို၊ လက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့သို့ချ၍ ဘယ်ဘက်လက်ကို ညာဘက်လက်ကဆုပ်ထားပြီး၊ အမေက သူ့မျက်နှာကို မမြင်ရ အောင် ခေါင်းကိုငုံ့ထားသည်။
“မြကြာမှုံ” ကတော့ သူ့ဆံပင်ရှည်များဖြင့် မျက်နှာကို တတ်နိုင်သမျှဖုံးအုပ်၍ ခေါင်းငုံ့ထား သည်။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့သည် အမေ့မျက်နှာကို တစ်ယောက်မှမကြည့်ရဲကြမည် မထင်ပါ။
အမေ့သည် ခေါင်းအုံးကိုကျောနောက်တွင် မှီ၍ထိုင်ရင်း သားသမီးများ၏မျက်နှာကို အကဲ ခတ်နေသည်။ အမေ့ကုတင်ပေါ်တွင် special power ဟုခေါ်သော အသင့်ရိုက်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် လွဲစာနှင့် လက်မှတ်ထိုးရန်၊ ဘောပင်တစ်ချောင်းရှိသည်။ အမေသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေး သားထားသော ထိုကိုယ်စားလှယ်လွဲစာကို ကောက်ယူဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို နားလည်သွားသည်။
အမေသည်ခေါင်းကို ညင်သာစွာငြိမ့်၍ နှုတ်ဆိတ်နေကြသူများကို အမေကပင်စ၍ ပြော သည်။
“သြ . . . ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းရတော့မယ်ဆိုပါတော့ . . .”
အမေအသံသည် တိုးတိတ်ညင်သာသော်လည်း၊ မောင်နှမသုံးယောက်စလုံး၏ ရင်ကိုတုန် ခါသွားစေသည်။ အမေကပင် ဆက်ပြောသည်။
“ပစ္စည်းသင်္ခါရ၊ လူသင်္ခါရ . . တဲ့၊
ဘာမှ စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေကြနဲ့၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ သေရင် ဘယ်သူ့နောက်မှပါမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့အဖေက လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အခုလိုရောင်းနိုင်အောင်လို့ထားခဲ့တာ
အခု . . သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပြည့်သွားတာ”
ကြည့်စမ်းပါဦး . . .၊ မေမေက ကျွန်မတို့ထင်ထားသလို ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းဖို့ မနှောမျော တဲ့အပြင်၊ ကျွန်မတို့ကိုပါပြန်ပြီး နားချနေလိုက်တာ၊ ဒီလိုရောင်းလို့ရအောင် ဖေဖေက ထားခဲ့ တာတဲ့။
ကျွန်မကောင်းကောင်းသိပါတယ် . . ၊
မေမေဟာ ဖေဖေကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်။
ဖေဖေကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့တဲ့ခြံထဲက သစ်ပင်တွေ . . .
မေမေကနှင်းဆီပန်းကြိုက်တတ်လို့ မေမေအိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်ရင် မြင်ရမယ့် နေရာ မှာ . . .နှင်းဆီပန်းတွေကို ဖေဖေကိုယ်တိုင်စိုက်ပေးခဲ့တာပါ။
အခု . . .သားသမီးတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့၊ မေမေ မနှမျောချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြောနေတာပါ။
မေမေ ဘယ်လောက်လျှို့ဝှက်တတ်တယ်ဆိုတာကို မောင်နှမအားလုံးသိကြပါတယ် . ..
ဖေဖေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်၊ မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းလေးကအစ ဖေဖေပတ်သွားတဲ့နာရီလေးအဆုံး အမြတ်တနိုးသိမ်းတတ်တဲ့မေမေဟာ . .
ဒီအိမ်ကြီးကို မနှမျောဘဲနေပါ့မလား . . .
ဒီအိမ်ကြီးမှာ . . . ဖေဖေအငွေ့အသက်တွေ . . .
ဒီအိမ်ကြီးမှာ . . . ဖေဖေပုံရိပ်တွေ
ဒီအိမ်ကြီးမှာ . . . ဖေဖေဟာမေမေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေ . . .
အို . . . ဒီအိမ်ကြီးမှာ . . . .
ဒီအိမ်ကြီးမှာ . . . . .
မြကြာမှုံထံမှ ရှိုက်သံတစ်ချက်ထွက်လာသည်။ မေမေသည် မြကြာမှုံစိတ်နုပုံကို သိ၍ မြကြာမှုံကို သူ့အနားသို့ခေါ်၍ ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ မြကြာမှုံက မေမေ့ပုခုံးပေါ်သို့ခေါင်းမှီ၍ မျက်နှာကို ဖွက်ပြီး ကြိတ်ရှိုက်နေသည်။ မေမေသည် မြကြာမှုံ၏ ဆံစကလေးများကိုသပ်၍ နှစ်သိမ့်ရင်း . . . .
“ရောင်းစရာရှိလို့ရောင်းရတာ ငိုဖို့မလိုဘူး သမီး၊ ဒါကျေနပ်စရာပါ၊ ရောင်းချင်လျက်နဲ့ ရောင်းစရာပစ္စည်းမရှိမှ ငိုရမှာ သမီးရဲ့ ‘တိတ်’ သမီးမေမေက ငိုတာမကြိုက်ဘူး”
မေမေသည် သြရသဘက်သို့ကြည့်၍ . . . .
“သားကြီး ဒီဘက်လှည့်၊ မေမေ့ကိုကြည့်စမ်း”
သြရသ တုန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး၊ မေမေဘက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လိုက်သည်။ အံကို တော့ ကြိတ်ထားခဲ့ဖြစ်သည်။
“သားကြီးသြရသ မင်းတို့ကို မေမေဒီလိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ မမြင်ချင်ဘူး၊ မေမေကိုပြုံးပြစမ်း” ဟု အမေက ပြောသည်။
သြရသည်သည် အမေ့အတွက် ပြုံးပြရတော့မည်။ သူကြိုးစား၍ အမေ့ကိုပြုံးပြပါသည်။ သို့သော် . . .သူ၏အပြုံးတွင် အံကြိတ်သံများပါနေသည်။
“သားငယ် ‘သီဟလတ်’ မင်းလည်း အမေ့ကိုပြုံးပြစမ်း”
အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို သီဟလတ်ရင်ဆိုင်၊ ဖြတ်ကျော်ဖြေရှင်းလာခဲ့သည်။ ယခုတစ် ကြိမ်၊ ယခုအခြေအနေမျိုးမှာ အမေ့အားပြုံးပြရန် သီဟလတ်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဘယ်လိုပဲခက်ခက် အမေ့အတွက် ပြုံးပြရမည်။ အချိုသာဆုံးဖြစ်အောင် မျက်နှာကိုပြင်၍ အမေ ကျေနပ်စေမည့်အပြုံးဖြင့် သူပြုံးပြပါသည်။ ထိုသို့အပြုံးကို ဂရုစိုက်၍ပြုံးနေရသောကြောင့် မျက်လုံးက မျက်ရည်ကိုထိန်းဖို့ မေ့သွားပုံရသည်။
မျက်နှာကပြုံးနေသော်လည်း သီဟလတ်မျက်လုံးမှမျက်ရည်များက စီးကျနေသည်ကို၊ ပါးပြင်ပေါ်သို့နွေးကနဲဖြစ်သွားမှသတိပြုမိသွားပြီး ကလေးတစ်ယောက်မျက်ရည်သုတ်သလို၊ ကမန်းကတန်းသုတ်လိုက်မိသည်။
မေမေသည် သီဟလတ်ကိုပြန်ပြုံးပြရင်း၊ သူ့ပုခုံးပေါ်တွင် ခေါင်းတင်ထားသောမြကြာမှုံ၏ မျက်နှာကလေးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီး .. . . . .
“ဟိုမှာကြည့်စမ်း . . .ကိုကိုကြီးနဲ့ကိုကိုလေးက မေမေ့ကိုပြုံးပြနေကြပြီ၊ သမီးလေးပဲကျန် တော့တယ်၊ မျက်ရည်တွေသုတ်လိုက်ပြီးရင် မေမေ့ကိုသူတို့လိုပဲပြုံးပြ”
မြကြာမှုံသည် အမေ့ကိုငိုမဲ့မဲ့လေးနှင့် ပြုံးပြရှာသည်။ အမေကလည်း ပြန်ပြုံးပြပြီး။
“ကဲ . .မေမေလက်မှတ်ထိုးရမယ့်နေရာကိုပြ” ဟုပြော၍ စာရွက်စာတမ်းအားလုံး လက်မှတ်ထိုး၍ လည်းကောင်း၊ လက်ဗွေများနှိပ်၍လည်းကောင်းလုပ်ပြီးသည်နှင့် သားသမီးများ ၏ နဖူးလေးများကိုနမ်း၍ နှုတ်ဆက်သည်။ ပြီးတော့ . . . အမေသည် အလှပဆုံးပြုံးရင်း . . ..
“သားတို့သမီးတို့လည်းနားကြတော့ . . .
မေမေလည်းအိပ်ရာထဲမှာ ၀င်သက်၊ ထွက်သက်လေးမှတ်ရင်း နားလိုက်ဦးမယ်” ဟုပြော ရင်း အမေသည် မျက်လွှာလေးပိတ်၍ နားနေရှာသည်။ မောင်နှမသုံးယောက်၊ ဧည့်သည်များကို ခေါ်၍ ဧည့်ခန်းဆီသို့ထွက်လာကြသည်။
အမေသည် သူတို့ထင်ထားသည်ထက် လျှို့ဝှက်နိုင်လွန်းလှသည်။
အမေသည် သူတို့ထင်ထားသည်ထက် မြိုသိပ်နိုင်လွန်းလှသည်။
အမေ၏နှုတ်ဆက်အနမ်းသည် သူတို့မောင်နှမကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားခြင်းဖြစ်သည် ကို မကြာခင်သိလိုက်ရသည်။
အမေ . . .
အမေမှတ်မယ်ဆိုတဲ့ ၀င်သက်၊ ထွက်သက်မှာ . . . .
ထွက်သက်သာပါပြီး . . . . .
၀င်သက်မပါဘူးဆိုတာ . . . .
ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ် အမေရယ် . . .. . . .
အမေဆုံးသည်နေ့သည် . . . .
မြကြာမှုံအတွက် . . . . ကောင်းကင်ပြိုသောနေ့ဖြစ်သည်။
“သီဟလတ်” အတွက် . . . . လမင်းပျောက်သည့်ညဖြစ်သည်။
သြရသအတွက် . . . . ကမ္ဘာပျက်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။
သြရသ၏ ကမ္ဘာကိုဖျက်သည့်သူကို မထင်မှတ်ဘဲသိလိုက်ရသည်။
ပွဲစားက ငွေအကျေစာချုပ်နှင့်အမည်ပြောင်းစာချုပ်ပေါ်တွင် မည်သူ့အမည်ဖြင့် ရိုက်ရမည် ကို တစ်နေရာသို့ဖုန်းဆက်မေးပုံရသည်။ ဖုန်းထဲမှလူက နံပါတ်တစ်ခုကိညွှန်သည် ပွဲစားကထိုဖုန်း နံပါတ်ကိုပါးစပ်မှရွတ်၍ စာရွက်တွင်လိုက်မှတ်သည်။ သြရသက ထိုဖုန်းနံပါတ်ကို အလွတ်ကျက် ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ . . . ဆက်သွယ်ရေးအများသုံး လမ်းဘေးဖုန်းမှဆက်၍ စုံစမ်းလိုက် သောအခါ “အဓိပတိ” ၏လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်နေသည်။ သြရသကောင်းကောင်း သဘော ပေါက်သွားသည်။ တဘက်က . .စက်ရုံကို ပြန်မရွေးလျှင် ဥပဒေအရ ချိတ်ပိတ်မည်ဟုဖိအားပေး ပြီး တဘက်ကပွဲစားများနှင့်ပေါင်း၍ အိမ်ကိုအောက်ဈေးနှိုက်၍ ၀ယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သြရသည် တောချောက်ပြီးကျုံးထဲသို့ အသွင်းခံလိုက်သောဆင်တစ်ကောင်လို ခံစားလိုက် ရသည်။ လောဘသားတို့၏ စီးပွားရေးအရ ပက်စက်မှုတွင်သြရသတို့မိသားစု၊ စက်ရုံအလုပ် သမားမိသားစု၊ တို့ မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် . . . ရွေးစရာလမ်းမရှိ။
ထိုကိစ္စကို “သီဟလတ်” နှင့် “မြကြာမှုံ” ကို လုံးဝအသိမပေးဘဲ။ သြရသတစ်ယောက် တည်း သိမ်းထားခဲ့သည်။
အဓိပတိရေ . . . .
အမေသာ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့ . . . .
ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း . . . .
အခု . . အ . . .မေ . . .ဆုံး . . .ပြီ . . . ။
မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးညစာကို ၀အောင်စားထားပေတော့ . . . ..
အဓိပတိဘဏ်ရှေ့တွင် ငွေသွင်းသူ၊ ငွေထုတ်သူ၊ ငွေလွှဲသူ၊ ဖြတ်လျှောက်သွားသူများဖြင့် စည်းကားနေသည်။ ဘဏ်၏ကားပါကင်တွင် ကားမျိုးစုံရပ်ထားသည်။ ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနှစ် ဦးအပေါက်ဝတွင် စောင့်နေသည်။ ဘဏ်၏လုံခြုံရေးကင်မရာများက ဘဏ်အတွင်းတွင်သာမက၊ ဘဏ်၏အပြင်သို့ပါ ရိုက်ထားသည်။
သြရသည် အငှားကားတစ်စီးပေါ်တွင် အိနြေ္ဒရစွာထိုင်၍ စောင့်နေသည်။ အငှားကားကို နာရီနှင့်ငှားထားခြင်းဖြစ်၏။ အငှားကားဒရိုင်ဘာကိုတော့ ဘဏ်မှငွေလာထုတ်သူတစ်ဦးထံမှ အကြွေးရစရာရှိ၍ လာစောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောထားသည်။ အငှားကားကိုဘဏ်ရှေ့နှင့် အနီးဆုံးနေရာမှာရပ်၍ စောင့်နေ၏။ သြရသနာရီကိုကြည့်လိုက်သည်။ ဆယ်နာရီဆယ်မိနစ်ရှိပြီ။
ဆယ်နာရီဆယ့်ငါးမိနစ်တွင် အဓိပတိ၏ တူးသောင်ဇင်ဆဲဗင်းမာစီးတီးကိုရပ်လိုက်သည်ကို မြင်သည်နှင့် သြရသသည်၊ ခါးကြားမှအမဲလိုက်ဓားမြှောင့်ကိုထုတ်ပြီး၊ ကုတ်အင်္ကျီအတွင်းဝှက် ကာ အငှားကားပေါ်မှဆင်း၍ မာစီးတီးနားသို့လျှောက်သွားသည်။ ဘဏ်လုံခြုံရေးတစ်ယောက် ကကားတံခါးကိုဆင်းဖွင့်ပေးသည်။ ကားထဲမှ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို အပြည့်ဝတ်ထားသော အဓိပတိနှင့်အတူ ဘဏ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသော သူနှစ်ယောက်ဆင်းလာသည်။ သြရသည် အဓိပတိနားသို့လျှင်မြန်စွာကပ်သွားပြီး အရိုးအသွားဆယ်လက်မခန့်ရှိသော ဓားမြှောင့်ဖြင့် အဓိပတိ၏ ၀မ်းဗိုက်ဆီသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ မည်သူမှထင်မထားသော ဖြစ်ရပ်ကြောင့် အနီးရှိ လူများရုတ်တရက်ကြောင်သွားသည်။ သြရသည်သည် ဗိုက်ထဲသို့အသွားတစ်ဝက်ခန့်ဝင်သွား သော ဓားကိုဆွဲနှုတ်၍ အဓိပတိ၏ရင်ညွန့်ဆီသို့ နောက်တစ်ချက်ထိုးချလိုက်သည်တွင် အနီးရှိ လုံခြုံရေးတစ်ဦးက သြရသကိုဘေးတိုက်လူချင်း ၀င်တိုက်ပစ်လိုက်သည်။ သြရသ၏ ဒုတိယ မြောက်ထိုးချက်က ရည်ရွယ်ရာသို့မရောက်ဘဲ လွဲသွားခဲ့သည်။ အဓိပတိသည် မယုံနိုင်သလို ကြည့်ရင်း ဗိုက်မှဒဏ်ရာကို အုပ်ရင်းလဲကျသွားသည်။
မကြာခင် အော်ဟစ်သံများ၊ ဆူညံ၊ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်၍ ဘဏ်မှလုံခြုံရေးများ၊ ၀န်ထမ်း အချို့ရောက်လာပြီး၊ သြရသကိုရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်၍ လက်ထဲမှ ဓားကိုလုသူလု၊ ချုပ်သူချုပ်၊ အဓိပတိကိုကားပေါ်တင်၍ ဆေးရုံသို့မောင်းသူမောင်း၊ ရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားသူကြားဖြင့် ရှုတ်ရှက်ခတ်သွားသည်။
သြရသသည် ရုန်းရင်းကန်ရင်းဖြင့် ခေါင်းပေါ်သို့မာကျောသော အရာတစ်ခုဖြင့် အရိုက်ခံ လိုက်ရပြီး ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ပေ။
သြရသတစ်ယောက်ကတော့ . . . .
“မိုက်”နေရင်း “မှောင်” သွားခဲ့သည်။
သည်နေ့တွင် မေမေ၏ရုပ်ကလပ်ကို မီးသဂြိုဟ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ စက်ရုံက ၀န်ထမ်း များ၏မိသားစု၊ မေမေ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ ဆွေမျိုးများ၏၀ိုင်းဝန်းကူညီမှုကြောင့် မေမေ၏ ဈာပနသည် စည်ကားလှသည်။ မြကြာမှုံကတော့ မေမေ၏နောက်ဆုံးခရီးကို အလှပဆုံး ပြင်ဆင်နေသည်။ ငိုတာကို မကြိုက်သည့်ဖေဖေနှင့်မေမေကြောင့် မငိုအောင်ထိန်းထားသည့်ကြား မှ မျက်ရည်တွေကျနေသည်။ သီဟလတ်ကတော့ မေမေ၏နောက်ဆုံးခရီးချောမွေ့စေရန်စီစဉ် နေသည်။
ထိုစဉ်ရဲကားတစ်စီးဆိုက်လာသည်။ လူအုပ်ကြားထဲမှ သြရသကို လက်ထိပ်ခပ်ထားပြီး၊ ရဲသားနှစ်ယောက်က လက်တစ်ဘက်စီကိုကိုင်၍ ဆင်းလာသည်။ မြကြာမှုံသည် လက်ထပ်ခတ် ခံထားရသော သြရသကိုမြင်သောအခါ . . .ပို၍ ၀မ်းနည်းလာပြီး သြရသရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်၍ ငို ချလိုက်သည်။
သြရသသည် လက်ထပ်ခတ်ထားသောလက်ဖြင့် မြကြာမှုံပါးမှ မျက်ရည်များကိုသုတ်ပေး ရင်း နှစ်သိမ့်နေသည်။ သီဟလတ်ကတော့ သြရသကိုကြည့်ရင်း၊ မချိတင်ကဲဖြင့်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက် ထားသည်။
သြရသသည် အမေမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးအကြိမ် တ၀ကြီးကြည့်၍ အမေအလောင်းကို ကန်တော့သည်။ ပြီးတော့ . . . သီဟလတ်နှင့်မြကြာမှုံအနားသို့သွား၍ နှစ်ဦးစလုံးကိုကြည့်ကာ၊
“အဓိပတိဆိုတဲ့ကောင် မသေဘူးတဲ့၊ ငါ့အမှုသက်သာရာ သက်သာကြောင်းအနေနဲ့ အဲဒီ အဓိပတိဆိုတဲ့ကောင်ဆီမှာ မင်းတို့ဘယ်တော့မှ သွားပြီး မတောင်းပန်နဲ့ ဒူးမထောက်နဲ့ကြား လား၊ ငါယောက်ျားလုပ်ရဲရင်ခံရဲတယ်၊ အေး . .. ငါ့စကားကိုနားမထောင်ပဲ၊ အဲဒီကောင်ဆီမှာ ဒူးထောက်တောင်းပန်တယ်ဆိုရင်တော့၊ ငါပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ မင်းတို့ကိုပါသတ်မယ် . .. ကြားလား . . .”
မြကြာမှုံနဲ့သီဟလတ်တို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ၊ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း သြရသကို အဖြေ ပြန်ပေးလိုက်သည်။
“စိတ်ချ . . .ကိုကိုကြီး . .. ကျွန်တော်အဲဒီကောင်ကို ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်”
သြရသက မြကြာမှုံကိုကြည့်လိုက်သည်။ မြကြာမှုံကပြောသည်။
“စိတ်ချပါ . . . ကိုကိုကြီး . .. ညီမလေးလည်း ကိုကိုလည်းပြောသလိုပါပဲ။ ဒူးထောက်ခြင်း ထောက်ရင်၊ ဒီတစ်ခါ . . . အဲဒီအဓိပတိဆိုတဲ့လူက ဒူးထောက်ရတဲ့အလှည့်ပဲဖြစ်စေရမယ် . .”
“အေး . . ကောင်းတယ်၊ ငါစိတ်ချမယ်ဟုတ်ပြီလား၊ ကဲ . . .ငါသွားမယ်”
သြရသသည် လူအုပ်ကြားမှ ရဲများနှင့်အတူ ပြန်ထွက်သွားလေသည်။ ထိုစဉ် . . . အမေ ဘက်သို့ ပြန်လှည့်လိုက်သောအခါ . . ဘယ်တုန်းက . . . ဘယ်သူလာထားသွားမှန်းမသိသော ပန်းခြင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ထိုပန်းခြင်းအောက်တွင်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသောစာ တန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။
စာတန်းကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါ . . . .
မြကြာမှုံသည် . . . .အသက်ရှုသံတွေမြန်လာသည်။
သွေးများဆူပွက်လာသလိုဖြစ်လာပြီး၊ ထိုပန်းခြင်းကိုဆွဲယူ၍ တစ်စစီဆုတ်ချေ၊ ဖျက်စီး လိုက် လေသည်။
အဓိပတိ . . . .
ရှင့်ကိုကျွန်မ မမြင်ဖူးဘူး . . . .
ရှင် . . . ဘယ်လိုလူလည်းဆိုတာ ကျွန်မမသိဘူး၊
ရှင့်ကြောင့် . . . မေမေဆုံးရပြီ
ရှင့်ကြောင့် . . . ကိုကိုကြီးထောင်ကျတော့မယ်
ရှင့်ကြောင့် . . . ကျွန်မတို့မိသားစုဘ၀ပျက်ခဲ့ရတယ်။
ရှင့်ကြောင့် . . . ကျွန်မတို့ရဲ့ စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်
ရှင့်ကြေင့် . . . ကျွန်မတို့ မသိခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးပြီလဲ။
ရှင် . . . ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ ဂရုမစိုက်ဘူး . . . . .
ရှင် . . . သိထားဖို့က
ရှင် . . .နဲ့ . . .ကျွန်မတို့ မိသားစုကြားမှာ . . . .
အ . . .ကြွေး . . .တင် . . သွား . . .ပြီ . . .
(ရှေ့လဆက်ဖတ်ပါ . . . . .)
Filed under idea story -sept'090comments
မှတ်ကြီးတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ခန်းရှိ ပက်လက်ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင် ငူငူငေါင်ငေါင် ထိုင်နေသည်ကို အခန့်သင့်ပင်တွေ့ရ၏။
ညီဆူးက အခန်းထောင့်သို့ သူ့အ၀တ်အစားအိတ်ကို “ဘုန်း”ကနဲ မြည်အောင်ပစ်ချလိုက် ပြီး . . ..
“ဒီမှာ . . မှတ်ကြီး။ မင်းဘာမှ အားမငယ်နဲ့တော့။ မင်းကို ကယ်တင်ဘို့၊ မင်းရဲ့ အမှားတွေ ကို တည့်မတ်ပြင်ပေးဘို့က ငါကိုယ်တိုင် ဒီအိမ်ကိုရောက်လာပြီ . . သူငယ်ချင်း”
သူများအိမ်မှာကပ်နေဖို့ရောက်လာသည်ကိုပင် အပြောကတော့ အထက်စီးမှမလျော့။
မှတ်ကြီးက ငေါင်တောင်တောင်ထိုင်နေရာမှ မျက်ခွံကလေးမ၀ံ့တ၀ံ့ပင့်လှန့်ကြည့်ကာ ပေကလပ် ပေကလပ်ဖြင့်
“မင်းကို အိမ်ကနှင်ချလိုက်ပြီလို့ ရိုးရိုးတမ်းတမ်းပြောရင်လည်း ရပါတယ်ကွာ”
အကြောင်းသိပြီးသားလူချင်းမို့ ညီဆူးကို မှတ်ကြီးက ကွက်ကျော်မြင်ပြီးသား။ ညီဆူးက တော့ . .အဟီး . .ဟု ရှက်ရယ်ရယ်သည်။ ပြီးမှ . . . . .
“နေစမ်းပါဦး . . . မှတ်ကြီးရ။ မင်း အရင်နေတဲ့အိမ်လေးက ကောင်းရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ဒီကို ပြောင်းလာရတာလဲ”
ညီဆူး၏မေးခွန်းကြောင့် မှတ်ကြီးတစ်ချက်တွေခနဲဖြစ်သွား၏။ ချက်ချင်းပြန်မဖြေနိုင်။ ပြီးတော့မှ . . . .
“အဲ . . . ဟိုဒင်းကွာ . . ဘာခေါ်မလဲ။ တိုးတက်မှုကို ရှေးရှူတဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ အပြောင်း အလဲဆိုတာရှိတယ် . . . သူငယ်ချင်း။ ဒါ . . တော်လှန်သော အဘိဓမ္မာပေါ့ကွာ။ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ မဟာအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးကြီးမှာတောင်မှ . ..ဒီလိုမျိုး အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲပြီး . . .”
“နေ ပါဦး . . နေပါဦး၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ သိပ်မပြောနဲ့ . .. မှတ်ကြီးရာ။ ဟိုဖက် ရပ်ကွက် ကနေ ဒီဖက်ရပ်ကွက်ပြောင်းလာတာ ဘာတွေများတိုးတက်သွားသလဲ။ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီဒေါက်တာမှတ်ကြီးလို့ လူတွေက ၀ိုင်းခေါ်ကြရောလား”
ငေါ့ပြောနေသော ညီဆူး၏စကားကြောင့် မှတ်ကြီးတစ်ယောက် ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက် ပေးရမည်မှန်းမသိဘဲ ယောင်နနဖြစ်နေပြီးမှ . . .
တစ်စုံတစ်ရာ ဖျတ်ကနဲ သတိရသွားဟန်ဖြင့် . . .
“သြော် . . .ဒီလိုလေ၊ ဒီအိမ်ကြီးမှာက တယ်လီဖုန်းရှိတယ်ကွ”
“ဟင် . . မင်းမှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ အရေးတကြီးပြောစရာ ဆိုစရာ ဘာအလုပ်အကိုင်မှ မယ်မယ်ရရမရှိတာ။ ဘာထူးလို့လဲ”
“ငါ့လခွေး။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် . .. မင်းက အဲဒီလို ဒဲ့ဒိုးကြီးပြော လိုက်တော့ ငါရှက်သွားတာပေါ့ . . ဟီး . .ဟီး”
“ဟေ . . . မင်းက ရှက်လည်းရှက်တတ်သေးသကိုး”
ညီဆူးက အံ့သြဆန်းကျယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို မယုံနိုင်စဖွယ် ဘွားဘွားကြီးတွေ့လို့ရသလိုမျိုး ရေရွတ်မိ၏။ မှတ်ကြီးက . . .
“တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကွ။ အရင် ဒီအိမ်မှာနေသွားတဲ့ အိမ်ရှင်က သူ့တယ်လီဖုန်းကို လမ်းသူ လမ်းသားတွေ အချိန်မရွေးလာပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ခွင့်ပေးထားတယ်ကွ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖုန်းဆက်ခပေးပြီး လာဆက်တဲ့သူ သုံးလေးယောက်လောက်တော့ရှိတတ်တယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်း နံပါတ်ကနေတစ်ဆင့် သူတို့ကိုခေါ်ခိုင်းရင်ရတယ်ဆိုပြီး အပြင်က သူတို့မိတ်ဆွေတွေကိုပါ ပေးထားတော့ သူတို့ဆီဆက်တဲ့ဖုန်းတွေလာရင် အိမ်အထိလိုက်ခေါ်ပေးရသေးတယ်ကွ”
“အေးလေ . . လုပ်ပေါ့ကွ။ ဖုန်းဆက်ခက မင်းပဲရတာမဟုတ်လား။ လက်ဖက်ရည်ဖိုး အတွက် မပူရတော့ဘူးပေါ့ . . .မှတ်ကြီးရ”
မှတ်ကြီးက ညီဆူး၏စကားကို စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာနားခါးဟန်ဖြင့် ဦးခေါင်းကိုဆတ်ကနဲ တစ်ဖက် သို့လှည့်ကာ မျက်နှာရှုံမဲ့ ပစ်လိုက်ရင်း . . .
“ဟေ့ကောင် . . ညီဆူး။ မင်းက ငါ့ကို ပိုက်ဆံမျက်နှာတစ်ခုတည်းကြည့်တဲ့ကောင်လို့ ထင်ရသလား။ ငါ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေ ချောမွေ့ အောင် ကူညီနေတာ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်နေတာကွ။ ငါဟာ နှယ်နှယ်ရရမှတ်ကြီး မဟုတ်တော့ဘူး . . သူငယ်ချင်း။ ပြည်သူလူထုအတွင် ရှင်သန်နေတဲ့မှတ်ကြီး . .၊ ပြည်သူလူထုရဲ့သားကောင်းရတနာ မှတ်ကြီး . . ၊ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ မှတ်ကြီး . . ၊ ပြည်သူ့မှတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီကွ . . နားလည်လား”
ညီဆူးခမျာလေးမှာကား နေစရာမရှိပြီ။ သူ့နှုတ်မှ ခပ်တိုးတိုးသာ ညည်းမိရှာသည်။
သြော် . . .မှတ်ကြီး . . မှတ်ကြီး။
တကယ်တော့ . . မှတ်ကြီးတစ်ယောက် ဟိုဖက်ရပ်ကွက်မှာ မျက်နှာမပြ၀ံ့လောက်အောင် ကို မဟာမရှက်တော်ဗြန်းဗြန်းကွဲရသော အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုနှင့် ကြုံပြီး အိမ်ပြောင်းပြေးလာခဲ့ခြင်း သာဖြစ်၏။
ဟိုဖက်ရပ်ကွက်မှာနေတုန်းက သူ့အိမ်နှင့်တစ်လမ်းကျော်တွင် နေထိုင်သော ကောင် မလေးနှစ်ယောက်ကို မှတ်ကြီးက အသည်းအသည်ကြိတ်ပိုးသည်။
အဲသည်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံးက နယ်မှလာသူတွေဖြစ်ကြပြီး ဂျာနယ်တိုက်တစ် တိုက်တွင် အလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့် ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင်က ဘော်ဒါဆောင်သဘောမျိုး အိမ် တစ်လုံးငှားပေးပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကိုနေထိုင်စေခြင်းဖြစ်၏။ မှတ်ကြီးကလည်း အဖော်ရအောင် မဂဇင်းတိုက်တစ်ခုတွင် တောက်တိုမယ်ရလုပ်နေသူဖြစ်ရာ ဂျာနယ်နှင့် မဂဇင်းလုပ်ငန်းချင်း အမျိုး တော်သည်ဟု အတင်းဇွတ်ဆွဲ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို အားပေးကူညီသည်။
ကောင်မလေးတွေနာမည်က သီသီနှင့်ကေသွယ်ထွန်းဆိုလား ဘာလားမသိတော့။ မှတ်ကြီးကတော့ မျက်နှာပြည့်ပြည့် ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် သီသီဆိုသောကောင်မလေးကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသည်ဟုဆိုသည်။ (အမှန်ကတော့ နှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူ့ရရပါ)
ကောင်မလေးတွေကတော့ (မှတ်ကြီးလိုမျိုး ဗိုက်ပူရွှဲရွှဲ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးဗလပျစ်၊ ဗိုက်ကြယ်သီး ပြုတ်ရှပ်အင်္ကျီမှာဖားဥတွေစွဲပြီး မဲညစ်နေသော) လူ ဘုတ်ထိုင်းကြီးတစ်ယောက်က သူတို့ကို “ချစ်တတ်သောနှလုံးသားဂွတ်ရှယ်ကြီး” တပြွတ်တခဲဖြင့် စိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မည်ဟု ထင်ကို မထင်။
ခိုင်းကောင်းစေကောင်းသည့် ငပေတုံးကြီးတစ်ယောက်ရပဟဲ့ဟုဆိုကာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြရှာသည်။(တကယ်တမ်း . . မှတ်ကြီးက သဘောလည်းကောင်းရှာပါသည်) ကောင်မလေး တွေခမျာ ရပ်ကွက်ထဲကို ရောက်လာကာစ လူသစ်တွေလည်း ဖြစ်တော့ အကြောင်းကိစ္စတစ်စုံ တစ်ရာရှိတိုင်း
“ဦးမှတ်ရေ . . .ဦးမှတ်ရေ”
နှင့် ပါးစပ်ဖျားက မချအောင်ကို မှတ်ကြီးကို ရိုးရာကိုးကွယ်သည့် နတ်လိုတ,ကြသည်။ ဒါကို ပင် ငနဲသားက
“အင်း . . ၊ ဒင်းတို့ခမျာလေးတွေ ငါမရှိရင်တော့ ခက်ရှာချေရော့မယ်” ဟု ကရုဏာသက် ကာ တောက်တခေါက်ခေါက်၊ မျက်ရည်တဝေ့ဝေ့ဖြစ်လိုက်သေးသည်ဆို၏။
သို့ဖြင့် . . အနေကြာလာတော့ မှတ်ကြီး၏ရင်ထဲမှာ ဝေဒနာက နုရာမှရင့်၊ ရင့်ရာမှ အခေါက်ထူပြီး အပွေးပါတက်လာသည်။
တစ်ည . . .
မှတ်ကြီးက သူ့နှလုံးသားမိုလေ၀သအခြေအနေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေငြာချက်ထုတ် တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီး ရဲဆေးတင်၏။
ရဲဆေးကို အတော်ပင်လက်လွန်ခြေလွန်တင်ပစ်လိုက်မိပြီး လူမှန်းသူမှန်းမသိ၊ မူးလေတော့ သည်။ (ခါတိုင်းညတွေလည်း လူမှန်းသူမှန်း မသိအောင်မူးနေကျပါပဲ။ အဲသည်ညကတော့ အချစ် ၏ တန်ခိုးများကြောင့် သောက်နေကျထက် နှစ်ဆခွဲကျော်ကျော်လောက်ဆော်ထည့်လိုက်သည်ဟု ဆို၏)
ကောင်မလေးတွေနေသည့် အိမ်ကို တံခါးသွားခေါက်တော့ ညဆယ်တစ်နာရီခွဲနေပြီ။
“ဒေါက် . .ဒေါက်၊ ဒေါက် . .ဒေါက်”
“အေ့ . . တီတီ”
အာလေးလျှာလေးကြီးဖြင့် သီသီ့နာမည်ကိုပင် ပီပီသသမခေါ်နိုင်တော့။ ကောင်မလေးတွေ က အိပ်နေရာမှ ကမန်းကတန်းထလာကြပြီး။
“ဟင် . .ဦးမှတ်၊ အချိန်မတော်ကြီး . ..ဘာဖြစ်လာတာလဲ”
“ဦးမှတ် . . . အရက်တွေ တအားမူးလာတယ် ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် သောက်ရတာလဲ . .ဦးမှတ်ရယ်”
မှတ်ကြီးကတော့ ဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်တော့။ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ရေချိုးခန်းဆီသို့သာ ယိုင်ထိုးယိုင်ထိုး ပြေးတော့သည်။
လက်ဆေးကြွေဇလုံမှာ ဦးခေါင်းကို ထိုးချလိုက်ပြီးနောက်။
“ဝေါ့ . .အော့ အော့၊ အေ့ . . ဝေါ . . ဝေါ”
“ဟယ် . . ဒုက္ခပဲ၊ ဦးမှတ် အန်နေပြီနဲ့တူတယ်”
“ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ငါတို့အိမ်ပေါ်မှာ သေသွားရင်ပြဿနာပဲ”
ကောင်မလေးနှစ်ယောက်က ဘာမှမလုတ်တတ် မကိုင်တတ်ဖြင့် ပြာယာခတ်ကုန်ကြသည်။
မှတ်ကြီးကတော့ ဘတ်စ်ကားအိုကြီး ၀မ်းဒလဟောလျောသလို တဗြီးဗြီး . . တဂွီးဂွီး . . တဝေါဝေါ . . သံစုံမြည်နေ၏။
တခြားအရက်သမားများ စိတ်ရှိလက်ရှိအန်ပြီးလျှင် အမူးရှိန်ပေါ့ကာ အနည်းငယ်သက်သာ သွားတတ်ကြသည်။ မှတ်ကြီးကတော့ အားပါးတရ ဘွင်းဘွင်းကြီးအန်ချလိုက်ပြီးနောက် ရေချိုးခန်းထဲမှ အပြင်သို့ လှးမ်ထွက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ခွေခနဲလဲကျသွားလေတော့ သည်။
“ဟဲ့ . .အောင်မလေး၊ လုပ်ကြပါဦး။ ဦးမှတ် . . .သေသွားပြီလားမသိဘူး”
“ဦးမှတ် . . ဦးမှတ် . . .”
“ခေါ . . ခူလူး . . ခွီး . .ဖူး”
အချစ်နှင့်အတူ ပျံသန်းလာခဲ့သော မှတ်ကြီးကား ရေချိုးခန်းရှေ့ သံမံတလင်းပေါ်တွင် ကိုယ်စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာ မှေးစက်ပျော်လေပြီ။
ကောင်မလေးနှစ်ယောက်က ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမည်မှန်းမသိဖြစ်ကြပြီး လမ်းထဲက ဆယ်အိမ်ခေါင်းကို သွားခေါ်ကြသည်။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းရောက်လာတော့လည်း မှတ်ကြီးကို ဘယ်လိုမှနှိုး၍မရ။ အိပ်နေလိုက်သည် မှာလည်း ပိုးလိုးပက်လက်၊ ပုဆိုးတွေ ဘာတွေပင် ပြေလို့။ သွားရည်တွေကလည်း စီးကျလို့ . . ။
ပွေ့ချီထမ်းခေါ်ပြီး နေရာရွှေ့ဘို့ဆိုသည်ကလည်း ဗိုက်ရွှဲရွှဲမှတ်ကြီး၏ စဉ့်အိုးအငယ်စားခန့် ရှိသော ခနာကိုယ်ကို ဆယ်အိမ်ခေါင်းက မ,မနိုင်။ နောက်ဆုံးတွင်ကား . .အိပ်လို့ကောင်းနေ တုန်း အတင်းလာနှိုးသဖြင့် ထလိုက်လာခဲ့ရသော ဆယ်အိမ်ခေါင်းက စိတ်မရှည်တော့ပဲ . . .
“ကဲ . .ဒီကောင်ကြီးကို ဟောဒီမှာဘဲ ပစ်သားထားလိုက်ကြပါ . .ငါ့တူမတို့ရယ်။ ဒီ . . မှတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်က ရူးတူးတူးပေါတောတော လုပ်တတ်တာကလွဲလို့ ညည်းတို့ကို အန္တာရာယ်ဖြစ်လောက်အောင်တော့ ဒုက္ခမပေးပါဘူး
ညည်းတို့အိပ်ခန်းကလည်း သော့နဲ့ဘာနဲ့ လုံလုံခြုံခြုံပဲဥစ္စာ။ အခန်းကို အတွင်းကနေသာ သော့ချပြီး အိပ်ကြ။ မနက်အိပ်ယာနိုးရင် ဒီကောင်ကြီးသူ့ဖာသာသူ ထပြန်သွားလိမ့်မယ်”
သည်လိုနှင့် မှတ်ကြီးတစ်ယောက် ရေချိုးခန်းရှေ့သံမံတလင်းပြင်တွင် အမေ့ရင်ခွင်မှာလို့ အပူပင်အကြောင့်ကြကင်းမဲ့စွာဖြင့် “တခူးခူး . .တခေါခေါ” အသံဆိုးကြီးများဟောက်ရင်း ကုလား သေကုလားမော အိပ်ခွင့်ရတော့သည်။
အပြစ်ကဆိုးချင်တော့ . . ..
ရေချိုးခန်းအထွက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခြေသုတ်ဘို့ထမီအဟောင်းလေးတစ်ထည်ခေါက်ပြီး ချထားသည်။ ကိုယ်တော်မြတ်မှတ်ကြီးက မူးမူးဖြင့် အိပ်ရင်း ထိုထမီဟောင်းအခေါက်ပုံကို ဦးခေါင်းတင်ကာ အုံးစက်တော်မူ အုံးစက်တော်မူ၏။
ကြာလာတော့ အိပ်ပျော်နေရာက လူးရင်းလှိမ့်ရင်းနှင့် ထိုထမီက မှတ်ကြီး၏လည်ပင်းမှာ စွပ်နေလေတော့သည်။
(ထားတော့ . . .၊ ဒီ အထိလည်း ပြဿနာမရှိသေးဟု ပြောလို့ရသည်)
တကယ် ပြဿနာက . . မနက်မိုးလင်းမှ ပေါ်ခြင်းဖြစ်၏။
မနက်အိပ်ရာကနိုးတော့ . . မှတ်ကြီးက သူ့လည်ပင်းမှာ ထမီကွင်းသိုင်းလျက်သား ဖြစ်နေ သည်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။
ဟင် . .ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။
သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ (အအိပ်ကြမ်းသောကြောင့်) ပုဆိုးက ဟို့လို့ ဟောင်း လောင်း . . . .။
ဒါ . . . .ဒါဆို . . .။
မနေ့ညက ဒီအိမ်ကို ရောက်လာပြီး သီသီ့ကိုအတင်းနှိုးကာ တံခါးဖွင့်ခိုင်းခဲ့သည်ကို သူမှတ် မိသည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူဘာမှ မမှတ်မိတော့။
အခု နိုးလာတော့ သီသီ့ထမီက သူ့လည်ပင်းမှာ . . .။
သူ . . .ကိုယ်တိုင်ကလည်း အ၀တ်အစားတွေဖရိုဖရဲ . . .။
မှတ်ကြီး ရင်ထဲတွင် ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး အလန့်တကြားအတွေးတစ်ခုက ဗြုန်းဆို ဦးနှောက်ထဲရောက်လာသည်။
ငါ . .ငါဟာ လူမဆန်အောင် ယုတ်မာမိပြီ။
ဖြူစင်တဲ့ အပျိုစင်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့် ညစ်နွမ်းအောင် နင်းချေခဲ့တဲ့ တရားခံဟာ ငါပါလား။
ငါ . .မှားပြီ။ ငါ . . .မှားပြီ။
သူ့အတွေးနှင့်သူချောက်ချားပြီး မှတ်ကြီးတစ်ယောက် ဆောက်တည်ရာမရ ကြေကွဲနေ သည်။ ထိုစဉ် . . . .
ခနဲ မြည်သံကြားလိုက်ရပြီး အိပ်ခန်းတံခါးပွင့်လာ၏။ ပြီးတော့ ဖြူဝင်းနုနယ်သည့် ခြေထောက်လေးတစ်ဖက် . . .။
သူ မော့ကြည့်လိုက်တော့ . . .သီသီ။
မှတ်ကြီး၏နှုတ်မှ စကားသံတစ်စွန်းတစ်စ အက်အက်ကွဲကွဲထွက်ကျလာ၏။
“သီသီ . .။ငါ့ကို . . ငါ့ကို . . .”
ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ . . ဟု သူ့နှုတ်မှ ပြောမထွက်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အပျိုရည် ပျက်အောင် စော်ကားမိပြီဖြစ်သော သူ့ကိုယ်သူပင် ခွင့်မလွှတ်ချင်။
ဗြုန်းဆို . . .၊
မှတ်ကြီးက ၀ုန်းကနဲထပြီး အနီးဆုံးတိုင်ကို သူ့ခေါင်းဖြင့် ပြေးတိုက်လိုက်သည်။
“အီး . . ဟီး . .ဟီး၊ သီသီရာ . . ငါ့ကို နင်ပေးချင်တဲ့အပြစ်ပေးပါ၊ ငါ မှားသွားတယ် . . ငါဟာ . . ခွေး . .ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ကောင်ပါ . . အီး . .ဟီး . .ရွှတ်”
ပြောလည်းပြော၊ ငိုလည်းငိုရင်း တိုင်ကို ဦးခေါင်းဖြင့် တဒိန်းဒိန်းဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာ တိုက်၏။
သီသီကတော့ မှတ်ကြီး ဘာအဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ပြောနေသည်ကို သဘောမပေါက်သောကြောင့် ကြောင်ငေးကြည့်နေ၏။
မှတ်ကြီးက တရှုံရှုံငိုရင်း . . .
“ငါကြောင့် . . . အဟင့် . .ရွှတ် . .နင် မနစ်နာစေရဘူး . .သီသီ ရွှတ် . .အဟင့် . .ငါ့ အမှားကို ငါတာဝန်ယူမယ် . .ရွှတ် . .ရှလူး . .ငါ နင့်ကို လက်ထပ်မယ် . .သီသီ”
“ရှင်၊ ဘုရား . .ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား ကယ်တော်မူပါ”
ကောင်မလေး မျက်လုံးပြူးသွားပြီ . . .
“ဦးမှတ် . . .ရှင် ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ ရူးများရူးသွားပြီလား မသိဘူး။ ဟင် . .လည်ပင်း မှာလည်း ခြေသုတ်တဲ့ထမီစုတ်ကြီး ကွင်းသိုင်းလို့ပါလား။ ဟုတ်ပါတယ် . . ရူးနေပါပြီ”
“ဘာ . .၊ ဒါ . .ခြေသုတ်တဲ့ထမီစုတ် . .ဟုတ်လား။ ဟင် . .ဒါဆို သီသီ့ထမီမဟုတ် . . မဟုတ်ဘူးပေါ့”
“ကြံ ကြီးစည်ရာရှင် . .ဘယ်က ဟုတ်ရမှာလဲ”
ငါဟာ . သောက်ပေါ၊ ငါဟာ . .သောက်ပေါ ပါလား ဟူသည့် အတွေးကို ဗြန်းခနဲတရားထူး ရသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်သွားပြီး တစ်ခဏတွင် . . .
မှတ်ကြီးတစ်ယောက် . .နောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ ထိုအိမ်ပေါ်မှ လွှားခနဲ ဆင်းကာ သုတ်ခြေတင်လေတော့သည်။
မှတ်ကြီးက ထူပြီး ထိုင်းပြီး ရှုပ်သည်။ ညီဆူးက ပြဿနာမွှေပြီး ရှုပ်သည်။ အခုတော့ . . အရှုပ်ထုပ်နှစ်ထုပ်သည် လူစုံ၊ စရိုက်စုံ စုဖွဲ့နေထိုင်ကြသော ရပ်ကွက်ကလေးတစ်ခုထဲသို့ ရောက် လာခဲ့ကြပြီ။
လူသည် . . . .
သူ့ပတ်ဝန်းကျင် (၁၈)လက်မ အတွင်းရှိ “လေ”ကိုသာ ရှူရှိုက်ကြောင်း သင်တို့ကြားဖူးပါ သလား။
Filed under idea short story - sept'090comments
ကဗျာရေးဖို့ ပြင်ဆင်နေရာကနေ ဘောလ်ပင်လိုက်ရှာရင်း အံဆွဲတွေမွှေနှောက် တိုလီမုတ်စတွေ ရှင်းလင်း စာအုပ်တွေစီရင်းညီရင်းနဲ့ အခန်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ရောက်သွားတော့လည်း မွေ့ယာတွေ ဖုတ်ဖက်ခါ၊ နေလှန်း၊ ကြမ်းတိုက်နဲ့ နဖူးကချွေး ခြေမမကျတဲ့အထိ ငါဟာ ငပျင်း တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါဟာ ညကြီးမင်းကြီးလည်း စာ ထရေးတတ်တာပဲ၊ ငါဟာ ငပျင်းငဖျင်းတော့ ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူး။ ဒါနဲ့များ ငါနဲ့ ပိုက်ဆံ ဘာလို့အတူမနေရပါလိမ့်၊ ငါ့အကြောင်းမသိဘဲ ဆက်ဆံ ရေးကျဲကြတာတွေ ဒီလူတွေ ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ သူမနဲ့ကွဲသွားတဲ့တစ်နေ့ သူမကို ငါထားခဲ့ တစ်နေ့ကို စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကြီးကို ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ၊ အဲဒါ ငါ့မှာခက် နေတာပဲ၊ ဟိုကောင် နေ၀ိုင်ဝိုင်ကတော့ အေးဆေးပဲ၊ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဘယ်မှမသွားဘူး၊ အိမ်ရှေ့ သံတံခါးပဲ ဆေးထိုင်သုပ်နေတယ်။ အေးဆေးပဲ၊ ငါနဲ့ပတ်သက်သမျှ အင်း ငါကလည်း ပတ်သက်ခဲ့ တာကိုး တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်ကိုး အဲဒီလိုမြင်နေကြတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ ငါဟာ လေးနက်သူ ဖြစ်ကြောင်း ငါဟာ အနုပညာအထုံပါရမီနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ငါဟာ အိမ်က ကြောင်စုတ် လေးကိုတောင် ညစာမှန်မှန်ကျွေးလေ့ရှိကြောင်း ပြဖို့ မဟာရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့၊ အလုပ်ရှင် ကို မယုတ်မလွန်ပြောခဲ့၊ ရန်ကုန်မှာ နေ့ရွေ့ညရွေ့နဲ့ တစ်လကြာပြီး တစ်ညမှာ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး တည်းခိုနေတဲ့နေရာ နွမ်းလျအိမ်ပြန်တော့ ဒီကားဟာ ငါ့မြို့ငါ့အိမ်ကိုရောက်သွားရင် သိပ်ကောင်း မှာပဲလို့ တွေးမိ၊ ဟုတ်တယ် ငါ့အိမ်ကို ရောက်မှာဘဲ၊ ငါ့အိမ်ကို ငါပြန်ရောက်လာတော့ တစ်ဖက် မှာ ကဗျာ မျက်နှာဖုံးရှင်၊ တစ်ဖက်မှာ ရပ်ကွက်ထဲ ရင်လို ယောင်ခြောက်ဆယ်၊ မနက်စာကို အလုပ်တစ်ခုနှယ် အချိန်ယူပြင်ဆင်စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ဟုတ်တယ် အိပ်သာဝင်ဖို့ကျန်သေး တယ်။ အားအားယားယား မဟုတ်ဘူး၊ အိမ်သာဝင်နေတာ ကျန်းမာရေးအရ၊ ပြီးတော့လည်း သွေး သားကိစ္စ၊ ရုပ်ပုံတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ အကောင်လိုက်ကြီး မဆက်ဆံရသရွေ့ မြင်မြင်သမျှနှာဘူးကျ လျက် ငါ့အားနည်းချက်ကို ၀န်ခံနေရတဲ့အပေါ် အထင်အမြင်သေးမယ်ဆိုလည်း သေးကြ၊ ကမ္ဘာ မှာတော့ ဒါဟာ မထူးဆန်းတော့ဘူး။ အလိုမတူတဲ့ ကိစ္စကလွဲရင် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဖောက်ဖျက်ရာ လည်းမကျတော့ဘူး၊ အဲသလို ကိုယ့်ဘက်က ဆင်ခြေဆင်လက် အသင့်အနေအထားနဲ့ ဆေးဝါး ကိစ္စလည်း အပါအ၀င်ပေါ့၊ ဘာဖြစ်လည်း ကိုဝင်းမြင့်တို့ ကိုလူဆန်းတို့လည်း တားမြစ်ထားတာ သိကြမှာဘဲ၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တာ သိကြမှာဘဲ၊ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင် တာလည်း သိကြမှာဘဲ၊ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ဆိုတာ အသိအပေါ် ယုံမှားသံသယဖြစ်နေ သေးလို့ ကိုဇေယျာလင်းလည်း ဒီလိုပဲနေမှာ၊ ကိုမိုးဝေရော၊ ညဆယ်နာရီခွဲမှ ပွဲကစတာ၊ ကိုငုအိမ် ဆိုင်ကနေ ခေါက်ခက်နဲ့ကောင်းပြည့်ရောက်၊ ကောင်းပြည့်ကနေခေါက်ခက်အရှိန် မသေသေးဘဲ သီရိမင်္ဂလာညဈေးမှာ လူမလဲဘဲ ပုလင်းလဲ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ လွမ်းခြုံနဲ့ အိမ်အပြန်ဇနီးမယား တွေထလာအောင် ခေါင်းလောင်းဆွဲရတာ ဒီတစ်နေ့တည်းလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီလိုည တွေက များပါပြီတဲ့ အလုံလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်ပြန်ကြနဲ့ ကားကြီးတွေက ဘေးကနေ တ၀ူး ၀ူးဖြတ်သွားနဲ့ ကိုဇေယျာလင်းရေ၊ အခုတောင် ဘိတ်ကနေ လှမ်းပူရသေးတော့၊ ခက်တော့လည်း ခက်ပါတယ် ညအိပ်ယာမ၀င်မှီ တစ်ခုခုထိခိုက်ခံစား ဒါမှမဟုတ် ထူးခြားပြောင်းလဲဖို့ ယောက်ျား သားတွေဟာ အချို့ပုံအောပြီး လောင်းကစားလုပ်ကြသလို အချို့အပေါင်းအသင်းတွေစုပြီး ညနေ ညနေစည်တယ်လေနဲ့ စိတ်ဖြေ၊စိတ်ပြေကြသလို သူတို့ အဲဒီလို ညကို ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်စေ တာ၊ ငါ အဲဒီလိုသုံးစွဲရင်း ယောက်ျားပီသကြောင်း ပြချင်နေတာလား မသိတာ၊ လူမှာ ပြောမနာ ဆို မနာနဲ့ အပြောင်အပြက်ရော အတည်အတံ့ရော အတိုင်အဖောက်ညီမယ့်တစ်ယောက်ယောက် တော့ လိုတာအမှန်ပဲ၊ ခင်ဗျားကတော့ စင်ကာပူကိုသွားဖို့ကိစ္စပြောမှာပေါ့။ ပြောနိုင်တာပေါ့၊ တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ့်အနေအထား တကယ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ကြားက ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ရှိနေပုံ ဖြစ်နေပုံဟာ အံမခန်းစွန့်စားခန်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဒါခင်ဗျားကို ဂုဏ်ယူတက်ဝကြွ ဖွယ်အန်ဝန်ခံမိတော့လည်း ခင်ဗျား ကျွန်တော့်အပေါ်သုံးစွဲတဲ့နိမိတ်ပုံက သစ်ခြောက်ပင်တဲ့၊ အသီးသီးဖို့လက်တစ်ကမ်းအလိုက ကြည့်ရင်တော့ အခုမှ အညှောင့်ပေါက်တဲ့ကောင်ကို ဘယ် အားရစရာရှိမလဲ၊ အခုမှပြန်တွေ့ကြတဲ့ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်က သိဖို့စကား လုံးတွေနဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်အပေါ်ခင်ဗျားထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပုံ တစ်ချို့်ကတော့ ကွက်တိပဲ၊ ဒါဟာ ငါ့ဘ၀တက်လှမ်းဖို့ နောက်တစ်ဆင့်များလား၊ တက်လှမ်းစရာ ရှိလို့ပဲ ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရတာလား၊ Black to the Future ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်အပြီးမှာ နားလည်ထား တာတစ်ခုက တစ်ချိန်မှာ မောင်ဘဟာ ကာလယန္တရားကိုတီထွင်နိုင်အောင် အနာဂတ်ကတီထွင် အောင်မြင်ပြီးတဲ့ မောင်ဘက ပစ္စုပ္ပာန်က မောင်ဘဆီလာပြီး ယန္တရားပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းကို ပြသခဲ့တယ်ဆိုတာ။ အဲဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျားဖြစ်နေတယ်၊ အခု မုန် တိုင်းသတင်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဂယက်တွေ မြင်နေကြားနေရတော့ ကိုယ်ဘာမှအဖြစ်မရှိတာ နည်းနည်းစိတ်သက်သာရသလိုပဲ၊ ကမ္ဘာကြီးက ပျက်နေပြီ။ ခင်ဗျားက ဘာဖြစ်ချင်သေးလို့တုန်း အဲသလို့ပေါ့။ ။
Filed under essay type story - sept'090comments